Kanan ani jedhe malee hin ta’u kan jedhu, jaarraa kanaaf hin malu – MM Dr Abiy – Fana Broadcasting Corporate
Kanan ani jedhe malee hin ta’u kan jedhu, jaarraa kanaaf hin malu – MM Dr Abiy
Finfinnee, Onkololeesa 7, 2012 (FBC) – Kanan ani jedhe malee hin ta’u kan jedhu, ilaalcha jaarraa kanaaf maluu miti jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
Ida’amuun, ilaalchaa fi falaasama walballeessuu takkaa hin qabu jedhaniiru muummee ministiraa Dooktar Abiy ebba kitaaba isaanii galma Barkumeetti gaggeeffamerratti.
Yaada fooyya’aa kan qabu Wiskii lafa kaa’ee kitaaba Baay’isuu jedhu barreessee dhiyeessuun, yaadaa fi falaasama Ida’amuu mormuun osoo danda’amuu; kanaan ala wanni walballeessuutti nama geessu takkaa hin jiru jedhan.
Ityoophiyaan akka badhaatu, akka guddattu, nagaa fi demokraasii dhugaa akka qabaattu ni hojjenna; Ityoophiyaan akka hin badhaane kan barbaadu garuu ni bada malee Ityoophiyaan hin baddu jedhaniiru Dooktar Abiy.
Walitti makamuun ADWUI akka waan biyya bittinsuutti lakkaa’uu fi sirna bulchiinsaa olaantummaa tokkee fiduutti haasa’uun waan ijoo hin qabne; dhimma dhugaarraa kan fagaatedha jedhaniiru.
Makamuun ADWUI humnaan balleessuu yoo ta’e; paartileen obbolaa ADWUI naannolee bulchaa turan mirga saboota kaanii cunqursaa turan jechuudha.
Ajandaa ani qabadheen ala kaan hin ta’uun ilaalcha siyaasaa jaarraa kanaatii miti; Wiskii lafa kaa’anii ummanni bishaan dheebote jiraachuu hubachuutu barbaachisa.
ADWUIn yaadaa fi falaasama akkamiitin akka makamu yaada dhiyeessineet karaa demokraatawa ta’een irratti mari’anneet murteessina malee, ani kophaa kiyya wannin murteesse hin jiru jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
Dhimmi walitti makamuu qoratamaa ture malee hojiirra hin oolle, adeemsaa fi naamusa qaba waan ta’eef jedhan.
Ida’amuun yaada lammiin hundi ‘ani biyya bulchuu nan danda’a’ jedhu of keessaa qaba.
Ityoophiyaanonni walajjeesuu hin qabnu; yaadaan injifachuu aadeffachuutu nurra jiraata.
Nagaa, nagaa kan jennu waraana sodaannee osoo hin taane, nageenya waan jaalannuufi jedhan muummee ministiraa.
Eertiraa waliin hojiileen eegalle akka galma ga’an cichooman ni hojjenna.
Badhaasni Noobeelii ani injifadhe, kan Ityoophiyaanota maraati. Badhaasa kana ummanni biyyattii marti eeggachuu qabas jedhaniiru.
Ityoophiyaan saatalaayitii mataa ofii akka qabaattus hojjechaa jirra jedhaniiru.